पुतली Staxx | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! पुतली Staxx | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
को NetEnt संचालित स्लट, पुतली Staxx सुन्दर नेत्रहीन देखिन्छ कि एक राम्रो सरल खेल छ. तपाईं ट्रपिकल फूल blooming छन् जहाँ राम्रो ठाउँमा आफैलाई पाउनुहुनेछ र उज्ज्वल पुतलीहरु मा खेल्न उपलब्ध छ कि यो स्लट तिनीहरूलाई बारेमा उड्दै छन् Fruity खेल पकेट.
नेट मनोरंजन मा स्थापित भएको थियो 1996 र अधिक को अत्यावश्यक अनुभव प्राप्त गरेको छ 20 अनलाइन गेमिङ उद्योग मा वर्ष. कम्पनी ठूलो गुण क्यासिनो सफ्टवेयर पर्याय छ र आफ्नो नवीनतम भेटी मध्ये एक मा आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ Fruity खेल पकेट.
त्यहाँ मा खेल्न उपलब्ध छ कि यो स्लट मा चार पङ्क्ति संग पाँच रील र चालीस paylines छन् Fruity खेल पकेट. तपाईंले सानो 40p रूपमा बाट खेलको रील स्पिन गर्न सबै उपयुक्त उपकरणहरूमा प्रत्येक स्पिन अप £ गर्न 400 प्राप्त र. को रील मा प्रतीक रील मा स्ट्याक प्रकट जे बाट गर्न पोकर कार्ड प्रतिमा साथै तीन ट्रपिकल blooms र चमकीले पुतली समावेश. जंगली प्रतिमा दृश्य मा कहीं निस्कनु र स्क्याटर छोडेर अन्य सबै प्रतीक प्रतिस्थापन गर्न सक्छ.
को को बोनस सुविधाहरू Fruity खेल पकेट स्लट समावेश:
अस्वीकार- यो सुविधा ट्रिगर गर्न, तपाईं पूर्ण रील कवर जो स्ट्याक पुतलीहरु भूमि गर्न आवश्यक. तिनीहरूले नै पङ्क्ति कुनै पुतलीहरु संग बाँकी सबै भन्दा पक्ष उत्प्रेरित. सुविधा रहन्छ सम्म तिनीहरूले स्थिति रहने. तपाईं रील मा प्रत्येक अतिरिक्त पुतली अवतरण लागि अतिरिक्त respin प्राप्त र बायाँ छेउमा गर्न उडान गर्ने क्लस्टर मा मिश्रण गर्न.
कोमलता Spins- दृश्य मा कहीं लैंडिंग तीन वा बढी स्क्याटर प्रतीक यो बोनस सुविधा सक्रिय. तपाईंले तीन छरिन्छ प्राप्त पाँच पुतली spins प्राप्त, छ पुतली चार छरिन्छ लागि spins र अन्ततः सात पुतली पाँच छरिन्छ लागि spins. यो सुविधा समयमा, तपाईं रील देखिने रेशमको कोयो प्रतीक हुनेछ. तिनीहरूले निष्क्रिय वा सक्रिय हुन सक्छ. सक्रिय cocoons आफूलाई पुतलीहरु मा रील मा उतरने पछि बस respin सुविधा जस्तै नै पङ्क्ति मा परिवर्तन र बायाँ छेउमा तिर उड. तिनीहरूले पनि सम्म सुविधा रहन्छ स्थिति रहनेछ.
पुतली Staxx एक नेत्रहीन अपिल खेल स्लट चमकिलो पुतलीहरु र ट्रपिकल blooms भरिएको संसारमा तपाईं लिइरहेको छ. प्रत्येक पुतली स्पिन तपाईं आफ्नो खम्बा 120x र ती सबै सात रही तपाईं यस मा 840x आफ्नो कुल खम्बा प्राप्त अर्थ हुन्छ Fruity खेल पकेट स्लट.
पकेट Fruity | स्लट कुनै जम्मा बोनस कोड |…
Copyrights ©2018, स्लट Fruity. सबै अधिकार सुरक्षित